Enweghị Mai Tai, ọ nweghị Vodka mgbe ụgbọ elu F22 Raptor Fighter Jets chụpụrụ ndị agha ụgbọ elu Russia kilomita 300 site na Hawaii
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Enweghị Mai Tai, ọ nweghị Vodka mgbe ụgbọ elu F22 Raptor Fighter Jets chụpụrụ ndị agha ụgbọ elu Russia kilomita 300 site na Hawaii
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ptorgbọ elu Raptor fighter jikọtara ebe na Pacific
E bugara ụgbọ elu F-22 Raptor US atọ na Sọnde, June 13, 2021, na Oke Osimiri Pasifik. Amalitere ụgbọ elu ahụ site na Hickam Air Force Base dị na Hawaii na Oahu iji mee ka ndị agha Russia pụọ ​​n'ụsọ oké osimiri US nke Hawaii.
US Airforce nwere ụgbọ elu F-22 Raptor. Ọ bụ ụgbọ elu nke ọgbọ nke ise nke, ruo taa, a na-ahụta ya dị ka onye agha stealth kacha mma n'ụwa.
Ọdịiche a tọrọ ntọala maka ụgbọ elu ndị ọzọ yiri ya ga -eso, nke nwere ọtụtụ ihe mbụ na -enye otuto ya:
F-22 bụ onye izizi webata ọhụhụ ala radar dị ala, nnukwu njem ụgbọ mmiri, nnukwu mmegharị ahụ, yana netwọ ihe mmetụta dị elu. F-22 nwekwara ikike ọgụ nkịta na-enweghị atụ, n'agbanyeghị na o nweghị ikike dị iche iche nke ụgbọ elu ndị agha na-adịbeghị anya.
Oge ikpeazụ ụgbọ elu a na -eme bụ na Hawaii na June 13 nke afọ a na -aza mkpasu iwe ndị Russia dị kilomita 300 n'akụkụ Waikiki Beach.
F-22 Raptor bụ ụgbọ elu ọgụ ọhụrụ nke Air Force. Nchikota ya nke stealth, oke oke, mmegharị ahụ, na ụgbọ elu agbakwunyere, yana nkwado nkwado ka mma, na -anọchite anya mgbali elu na ike ịlụ ọgụ.
Raptor na-arụ ọrụ ikuku na ikuku na ikuku ikuku. Ọganiihu dị ukwuu n'ịmepụta kokpit na ngwakọ ihe mmetụta na -eme ka amata ọnọdụ onye ọkwọ ụgbọ elu. Na nhazi ikuku ikuku, Raptor na-eburu AIM-120 AMRAAM isii na AIM-9 Sidewinders abụọ.
F-22 na-eweta stealth n'ime ụbọchị, na-enyere ya aka ọ bụghị naanị ichebe onwe ya kamakwa akụ ndị ọzọ. Injin F-22 na-arụpụta ihe karịrị nke injin ọ bụla na-alụ ọgụ ugbu a.
Nchikota ihe eji achọ mma na mmụba dị elu na-enye ohere ka F-22 na-agagharị na ikuku ikuku dị elu (karịa 1.5 Mach) na-ejighị afterburner-njirimara a maara dị ka nnukwu ibu.
Nkọwapụta ụgbọ elu ahụ bụ F/A-22 nwa obere oge tupu akpọgharịa ya F-22A na Disemba 2005.
Ndị ọrụ ndị agha US kwenyere na F-22 gbara ọsọ na Sọnde, June 13 na nzaghachi ndị na-atụ bọmbụ Russia na-aga nso na mbara ikuku America. Agbanyeghị na ụgbọ elu ndị agha Russia abanyeghị na United States Air Space na Hawaii. Ụgbọ elu US mechara laghachi na ntọala.
Na mbu, ekwuru na nzaghachi ndị agha bụ arịrịọ nke Federal Aviation Administration (FAA) mere ka ha mee “nchegharị ikuku oge niile”.
Na June 13, Iwu Indo-Pacific bidoro 2 Raptors na Camp HM Smith ruo n'iwu dị n'okpuru ya, Pacific Air Forces, 154th Fighter Wing, site na Hickam n'agwaetiti Oahu n'ihe dị ka elekere 4:00 nke mgbede wee soro Raptor nke atọ. otu awa mgbe e mesịrị. Ọ na-egosi na ejiri KC-135 Stratotanker-ụgbọ elu mmanụ ọkụ-na-arụ ọrụ, na-arụtụ aka na ụgbọ elu nwere ike chọọ enyemaka mmanụ.
Okwu a, nke ụlọ ọrụ ọ bụla, ụgbọ elu, ma ọ bụ onye nnọchi anya ndị agha kọwara nke ọma, edoziri ya na 3 Raptors na KC-125 Stratotanker laghachiri na Hickam Airforce base na Island nke Oahu.
Mgbe a gbara ya ajụjụ ọnụ, onye na-ekwuchitere FAA bụ Ian Gregor kwuru, “Anyị na ndị agha na-enwe mmekọrịta chiri anya.” Ndị agha ahụ nwere F-22s, ndị ọkwọ ụgbọ elu, ndị nlekọta, na ndị ọrụ ngwa ọgụ na-akpọ 24 awa kwa ụbọchị na Hickam iji zaghachi egwu egwu ikuku na agwaetiti ndị dị na Hawaii dị ka akụkụ nke ozi nche ikuku.
Eziokwu biara mgbe ubochi gachara mgbe isi igwe ihe omimi di omimi wepuru ajuju banyere edemede banyere ihe omume a.
Ihe mere n'ezie bụ na Russia eduzila ọrụ ụgbọ mmiri kachasị ukwuu na Pacific Ocean kemgbe Agha IIwa nke Abụọ - ikekwe imepe ala maka nzukọ Biden-Putin na Geneva. Emere mmega ahụ naanị narị kilomita atọ na narị ise site na ụsọ mmiri nke anwụ na-acha na Hawaii.
Otu izu gara aga, Russia kpara ụgbọ elu agha MiG-31 iji soro ụgbọ elu ndị agha US gafere ndị Barents, ụlọ ọrụ mgbasa ozi RIA kwuru na ọ na-ekwu maka nkwupụta ndị agha mmiri Russia.
Ndị agha Russia kwuru na amatala ụgbọ elu US dị ka ụgbọ elu P-8A Poseidon na eweghachiri ụgbọ elu ndị agha Russia na ntọala ya ozugbo ụgbọ elu US mere ntụgharị wee pụọ na ókèala Russia, dị ka RIA si kwuo.
Oke Osimiri Barents bụ oke osimiri dị n'akụkụ Osimiri Arctic, nke dị n'akụkụ ugwu nke Norway na Russia ma kewaa n'etiti mmiri mmiri Norwegian na Russia,
Laa azụ na 2017, FAA rịọrọ ụgbọ elu nkwado site na Hickam n'oge ahụ ka ezigara 2 F-22 ka ọ duga ụgbọ elu ụgbọ elu America si California n'ihi onye njem na-anwa ịmanye ụzọ ya n'ihu ụgbọ elu ahụ. Ndị FBI jidere onye njem ahụ mgbe ọ rutere.
154th Wing bụ akụkụ nke Hawaii Air National Guard mana ọ na -arụ ọrụ nke ọma na Air Force ma na -enye ọtụtụ nchekwa agwaetiti ahụ. Ọ nwere ndị ọkwọ ụgbọ elu F-22 na-akpọ oku awa 24 kwa ụbọchị na Hickam maka nzaghachi ngwa ngwa maka ihe egwu dị na agwaetiti Hawaii.
Ọtụtụ ngalaba ụgbọ elu ndị agha n'ofe mpaghara Pacific abawanyela ọzụzụ na oge ọrụ ha. Ndị agha ikuku malitere n'oge na -adịbeghị anya ịgbasa ụgbọ elu ya gburugburu Pacific na ụgbọ elu na -agakarị na ọdụ ụgbọ elu gafee agwaetiti ndị dị anya.